Shacabka Jigjiga oo khaati ka taagan arrin halis ah - BBC News Somali
Shacabka Jigjiga oo khaati ka taagan arrin halis ah
Qaar badan oo ka mid ah dadka ku nool dhulka Dowlad Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa waxa ay ka cabanayaan in deegaanadooda ay ku soo bateen dawooyinka iyo raashinka dhacay.
Arrimahaasna waxa ay dadka deegaanka u aanaynayaan isbadeladii maamul ee halkaasi ka dhacay dhawr bilood kahor. Isbadelka ayaa waxa uu horseeday in la dabciyo xayiraaddii mudada dheer saarneyd badeecooyinka kasoo gudbaya dhanka Soomaaliya.
Weriyaha BBC-da ee Jigjiga, Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam oo booqday isbitaalka Kaaraamardha ee magaalada Jigjiga ayaa buukaankii halkaa joogay waxay u sheegeen in dhibaatooyinka haysta ay u aanaynaayan raashinka iyo dawooyinka dhacay ee deegaankaasi la keeno.
Muxuu ra'iisal wasaaraha cusub ee Itoobiya ka doonayaa Jigjiga?
Khadar Abdirisaaq Ahmed waxa isbitaalka keenay hooyadiis oo uu sheegay inay saamaysay dhibaatadan.
"Xanuunadan awal wey yaraayeen balse hadda waa ay soo bateen, sababta cudduradan keentay ayaa ah inay dadka qaadanayeen daawooyin dhacay iyo cuntadii oo aan jirin cid baaraysa." Ayuu yiri Khadar Abdirisaaq
Maxamed Cali Wacays, waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howl gasha isbitaalka Kaaraamardha waxa uuna BBC-da uga warramay arrinkan.
" Waxaa jira sababa badan oo keena cuduradan sida nadaafad darrada, waxaana sidoo kale dhaca inay ciyaalka mararka qaar qaatan daawooyin dhacay ama ay waalidiinta tagaan farmashiyaha iyagoo soo iibsada daawooyin uusan dhakhtarka u qorin." Ayuu yiri Maxamed Cali.
Saamaynta ay leedahay qaadashada daawooyinka dhacay ayaa ah kuwa halis ah sida uu dhakhtarka sheegay waxa uuna yiri, "faaiidooyinkii looga baahnaa lagama helo daawooyinka dhacay waxayna horseedaysaa xanuun kale ooh or leh, iyadoo jirka ka dilayso difaaca."
Ayaan Cabdi Shukri, oo ah maareeyaha wakaaladda daba galka cuntada iyo daawooyinka ama Tayo-Dhawrka, ayaa BBC-da uga warrantay waxa isbadelka keenay.
"Lixdii bilood ee u dambaysay waxaa isbadelay habkii ay ku soo galayeen adeegyada sida sharci darrada ah ku soo gala, iyadoo ay jiraan xarumo badan oo aan hadda soo xirnay oo lagu iibinayey raashin iyo cabitaan dhacay."
Waxaa hadda magaalada Jigjiga ku soo badanaya cudurro badan oo aysan dhakhaatiirta weli xal u helin.